I-China Pineapple Ilaphu leNgxowa yoNgcoliseko simahla I-cosmetic Makeup Bag Packaging ye-Unisex yokuHamba mveliso kunye nabathengisi | Utshintsho
Iinanapple Ilaphu Ingxowa yongcoliseko simahla I-cosmetic Makeup Bag Packaging ye-Unisex yoKhenketho
Iphayinaphu yelaphu, ifayinaphu yegqabi lefayibha, eyaziwa njengefayinapile fiber, yile fayibha ekhutshwe kumagqabi ephayinaphu, eyeyomthambo ifayibha, enokukhutshwa ngamachiza, iindlela zebhayoloji kunye neendlela zoomatshini. Ifayibha ekhutshwe yindlela yoomatshini ikumgangatho olungileyo kwaye yendalo kwaye ayinangcoliseko.
Imveliso Isishwankathelo: JF20-22
Izinto: ilineni yelinen Ubunzima: 76g
Ubukhulu: I-L16 * W5 * H14cm Ukuvalwa: uziphu
Uncedo: Ezendalo, ezinokuphinda zisebenze, ezinokuphinda zisebenze, ezomeleleyo, ezinobuhlobo, ezingcoliseko simahla
Iphayinaphu yelaphu, ifayinaphu yegqabi lefayibha, eyaziwa njengefayinapile fiber, yile fayibha ekhutshwe kumagqabi ephayinaphu, eyeyomthambo ifayibha, enokukhutshwa ngamachiza, iindlela zebhayoloji kunye neendlela zoomatshini. Ifayibha ekhutshwe yindlela yoomatshini ikumgangatho olungileyo kwaye yendalo kwaye ayinangcoliseko. Kubonakalisiwe ukuba iinanapple hemp inezinto zebactericidal zendalo kunye nezinto ezinokubulala iintsholongwane kwaye zithintele ukukhula komngundo kunye neentsholongwane. Luhlobo lwezinto ezilukiweyo zokhathalelo lwempilo yendalo kunye nolwakhiwo olukhethekileyo lwepore ngaphakathi kwesakhiwo sefayibha kunye nokukwazi ukufunxa nokukhupha amanzi ngokukhawuleza.
Iphayinaphu ifayibha yinto yendalo, ezinzileyo, ekhohlakeleyo engenanto.Yenziwe ngamagqabi amdaka esityalo sepayina. La magqabi ayimveliso evela kuvuno lwamaphayinaphu akhoyo, ke into eluhlaza ayifuni sibonelelo songezelelekileyo sokusingqongileyo ukuvelisa.
Iphayinaphu yamagqabi e-ananas, eyimicu yegqabi ye-hemp, yifayibha ekhutshwe kumagqabi ephayinaphu. Inokudityaniswa nemicu yendalo okanye imicu eyenziweyo. Ushicilelo Easy kunye bokudaya, nomoya, akukho lula mibimbi, bekhululekile, eco-friendly.
Izinto zendalo, ukuthamba okuthe tye
Egqithileyo I-Eco-friendly Linen Cotton Bag Cosmetic bag
Okulandelayo: Indalo yendalo enokuphinda isebenze yokuthambisa ibhegi yokupakisha ye-Unisex yoKhenketho